U Diyaar Garowga Joojinta - 802Quits
Bogga ugu weyn » Vermonters » SABABAHA LOO JOOJIYO » U Diyaar Garowga Joojinta
ISKU DIYAAR GELI
Ma waxaad isweydiineysaa sida ugu wanaagsan ee aad uga joojin karto sigaar cabista, sigaarka elektaroonigga ah ama tubaakada kale? Fursadahaaga joojinta ayaa aad uga wanaagsan marka aad leedahay qorshe ku saabsan joojinta. Qaybtani waxay kugula socon doontaa sida loo maro dhabbaha qorshaha joojinta loogu talagalay iyo joojinta guusha.
Isu Diyaari Inaad Joojiso
Qaar ka mid ah waxyaabaha fudud ee aad sameyn karto waqti ka hor — xitaa hadda — si looga caawiyo kordhinta fursadahaaga guusha waxaa ka mid ah:
Ka takhalusida waxyaabaha tubaakada ku jira ee gurigaaga ku jira, sida dambasyada, shumacyada iyo xirmooyin dheeri ah oo sigaar ah ama sigaarka elektaroonigga ah, tubaakada la ruugo, buuriga lagu shiido ama qiiqa uumiga
Nadiifinta gurigaaga iyo gaarigaaga si urta sigaarku aysan kuu tijaabin doonin marka aad joojiso
Isticmaalidda balastar usbuuc ilaa taariikhda joojintaada si loo yareeyo ka-tagga nikotiinka (wax badan ka baro balastar bilaash ah laga bilaabo 802Quits)
Weydiisashada taageerada shaqaalahaaga, asxaabtaada iyo xubnaha qoyska si ay kaaga caawiyaan inaad guuleysato
Helitaanka saaxiib aad ka tagto oo kugula xisaabtami doona hadafkaaga joojinta
Naftaada Dhiiri geli
Qof kasta oo joojiya tubaakada wuu u sameeyaa sidaas sabab. Dadka qaarkiis, ma doonayaan inay dareemaan in laga tegey markii saaxiibadood oo dhami ay joojiyeen. Dadka kale, waxaa loogu talagalay caafimaadka ama qoyska ama sababta oo ah kor u kaca qiimaha tubaakada. Waa maxay sababtaada?
Qor sababahaaga inaad u joojiso sigaarka, sigaarka elektaroonigga ah ama waxyaabaha kale ee tubaakada laga sameeyo.
Ka fikir inta aad kari karto, yar ama yar
Liiska dhinac dhig dhawr maalmood
Kadib, dhex mar oo soo qaado 5ta sababood ee ugu sarreeya
La kulan Ana
Liiskaaga ku hayso oo nuqul dhig qaboojiyahaaga ama albaabka hore. Marka rabitaanka isticmaalka tubaakada wax ku dhufto, liiskaaga sababaha aad u joojineyso ayaa kaa caawin doona hamintaada gudbinta waxayna ku xusuusin doontaa doorashada weyn ee aad qaadatay.